You are here: Home / News / Council Induction
​Baziswe Ngokusikweni Abonyulwa BaseMzimvubu
Sele zidlulile intsuku ezilikhulu usodolophu kunye nebhunga lakhe beqalisile umsebenzi wabo kuloMaspala waseMzimvubu. Njengebhunga elitsha kunye Nenkosi Zomthonyama zaloMaspala ziluhambile ulwaziso, kufike ixesha lokuba abonyulwa basekuhlaleni ngokuncedisana norhulumante baziswe ngokusemthetheweni. Oku kwenzeke ngomhla we 27 EyoMqungu 2017 kwiHolo yakwaBhaca yalendela EmaXesibeni ngomhla we 02 EyoMdumba 2017 kwiHolo yaseSivumela.
Ukuqinisekisa ukuba yonke into ekuhlaleni ihamba ngokwendlela nangokulindelekileyo, abonyulwa basekuhlaleni ngabona abanoxanduva kwaye abaphinde babezindlebe zaloMaspala ekuhlaleni. Ingingqi nganye inabonyulwa abalishumi kwaye kunentlanganiso ezintathu ekufanele zihlalwe ngaba bonyulwa kunye noCeba walongingqi.
Ngabona bantu banomsebenzi ungamandla kuba okungahambi ngendlela nokungavumelekanga okwenzeke ekuhlaleni ngabona bantu bokuqala ukungenelela nabaxelelwayo ze bona baqhubeke ukudlulisela koCeba ukuze Iyofika kuMaspala angenelele njengabantu abanokuncedisa ukusombulula ingxaki zasekuhlaleni.